ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): မင်္ဂလာအကြိုပုံများ ၊ မင်္ဂလာလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် မင်္ဂလာအခမ်းအနား အမှတ်တရပုံများ
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 9:53 AM
သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ ဘဝကို သက်ဆုံးတိုင် လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
nyi ma lin let, very nice to see ur weddin' picz & birhday picz! wish uajoyful X'mas ,ahappy new yr wif ur new hubby!
Il mio augurio più affettuoso in questo giorno di festa
လိုက်ဖက်တဲ့စုံတွဲရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်သွားတယ်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဟန်းနီးမွန်း ဖြစ်ပါစေနော်.. :)
ညီမလဲ လုံးဝမထင်ရဘူး အရမ်းလိုက်ကြတယ်
သမီးရေ ဓါတ်ပုံတွေ စောင့်မျှော်နေတာ...
ခုလိုအဆင်ပြေ စည်ကားပျော်ရွှင်နေတာကို မြင်ရတဲ့အတွက်ပေါ့။
Congratulations to you and Ko NMA!
May you both be blessed for the many good years ahead together :)
ကိုနိုင်မိုးအောင်နဲ့ မလင်းလက် သာယာချမ်းမြေ့ပါစေ။ အပျော်လေးများကိုမျှဝေခံစားသွားပါတယ်။
အားကျမိပါသည်။ ပျော်ရွှင်သောဘ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ အမ။
မလင်းလက် နဲ့ ကိုနိုင်မိုးအောင်
သားကောင်း သမီးကောင်းလေးတွေ ရပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ကိုတည်ထောင်နိုင်ပါစေ။
ချစ်သူ နှစ်ယောက် အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေ....
(လောလောလတ်လတ် မင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ 2009 မှာ ပို့စ် အတင်ကျဲမယ် ဆိုတဲ့ ကိုပေါရဲ့ဟောစာတမ်းလို မဟုတ်ဘူးဆိုတာ 2009 မှာ သက်သေပြပါ။)
Happy birthday and Congratulation Naw!
You both areagifted match. I am so glad for your wedding.
Good luck Nyi Ma Lin Let.
Congratulations ပါညီမလေး :)
အားကျမိပါတယ် မလင်းလက်ရယ်... သာယာပျော်ရွှင်သော ဘ၀ကို တည် ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ နှစ်သစ်နှင့်အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ လာကြည့်သွားပါတယ် ညီမလေးရေ။
သာယာပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို ချစ်တဲ့သူနဲ့အတူ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ။
Thee Tone said...
Congratulations ပါ ညီမလေး။ သာယာပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့တဲ့ မိသားစုဘ၀လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
ကြယ်စင် ညီမလေး ပုံတွေ အရမ်းလှတွေ...
ပျော်ရွှင်စရာ ဟန်နီးမွန်းခရီး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...
သားကောင်း သမီးရတနာလေးတွေလည်း ဖွားမြင်နိုင်ပါစေနော်... :P
ဒီလင် ဒီမယား ရာသက်ပန် အဆင်ပြေပြီး ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာနဲ့ အိုအောင်မင်းအောင် ပေါင်းနိုင်ကြပါစေ။
အားကျသွားပြီ သိလား။ :P
အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့စုံတွဲလေးအတွက် ရာသက်ပန် အိုးအောင်မင်းအောင် ပေါင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပျားရည်ဆမ်းဒိုးနတ် အဲလေ..ပျားရည်ဆမ်းခရီးပြန်လာရင် ပုံတွေအများကြီးထပ်တင်ဦးနော် စစ်
နှစ်သစ်မှာ ပျားရည်ဆမ်းရင်း ပျော်ရွှင်သလို ရာသက်ပန်ရိုးမြေကျ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ညီမလေးရေ
နောက်ကားတွေ ကျော်တက်သွားတော့ ရှေ့ကားတွေ ဘူ ပိတ်ပီပေါ့ (ဟီး)
မကျေနပ်ဘူ: နောက်က အမီလိုက်ခဲ့မယ် (ဟဟာ့ )
နင်ဟာ အလှဆုံးသတို့သမီးပါ ညီမလေးရေ..
ချစ်ခင်ရသော မိတ်ဆွေမောင်နှမများ >> ခရီးက ပြန်ရောက်လာပါပြီ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ရက်က ဓာတ်ပုံများကိုတော့ ကိုယ်တိုင်တောင် သွားမယူရသေးပါဘူး။ ဖြေးဖြေးမှ ယူမယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။ ဆုတောင်းပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခံစားမှုပျော်ရွှင်ခြင်းများကို မျှဝေထားတာတွေကို နားလည်ခံစားပေးကြသူများကို ချီးကျူးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ တစ်ဖတ်သတ် အမြင်များနဲ့ မိမိလိုသလို ကောက်ချက်ချပြီး ပေါက်တတ်ကရ ကွန်မန့်ပေးနေသူများကို မလိုအပ်လို့ Approve မလုပ်ပေးထားပါ။ စိတ်ညစ်ခြင်းများ တစ်စက်မှမရှိဘဲ ရှေ့ဆက်အနာဂတ်ခရီးအတွက် ပန်းတိုင်ကို သေချာလျှောက်လှမ်းလျက်
ဘ၀ခရီးလမ်းမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေ...
ပျော်ရွှင်ပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းမှာ နှစ်များစွာတိုင် အတူ လျှောက်လှမ်းသွားကြရပါစေ...။
မမလင်းလက်... congratulations ပါနော်...
သတို့သမီးက အရမ်းလှသလို...သတို့သားနဲ့လည်း လိုက်ဖက်ညီပါတယ်...
သာယာတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းတခုကို နှစ်ယောက်အတူတူလက်တွဲပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။
Congratulations'..very sweet couple..
စူများတွေများ စွံကုန်ပီ ကိုယ်ပဲကျန်တော့လယ်ဂျာ
ညီမလေးရေ အခုမှရောက်ဖြစ်တယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပါစေနော်။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေနေစေဖို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။
အ ခု မှလာ လည်ဖူးတာပါ
ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်နဲ့ သာယာတဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းတခုကို နှစ်ယောက်အတူတူလက်တွဲပြီး ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ
လင်ချစ်၊ မယားချစ်ပါမက မောင်ချစ်၊ နှမချစ်ကဲ့သို့ သက်ဆုံးတိုင် အတူတကွ လက်တွဲပြီး အခက်အခဲ ဟူသမျှ ကျော်လွားအောင်မြင်နိုင်ပါစေ..
Congradulation to Mr Naing Moe Aung and Mrs Naing Moe Aung!!!!
ညီမလေးလဲ မင်္ဂလာဝတ်စုံလေးနဲ့ သိပ်လှတာပဲ..
ဒီစုံတွဲ ဘဝခရီးလမ်းမှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ပါစေဗျာ ...
အခုမှာ မဂ်လာဆုလာတောင်းပေးရတာ ဆောရီးပါနော်။
မလင်းလဲ့ရေ.. ဖိတ်ထားတာကြာလှပြီ.. အခုမှရောက်လာတော့တယ်.. ကိုကိုအတွက်.. အချိန်တွေ အများကြီးပေးနေရလို.နဲ့တူတယ်.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်... :) link ယူသွားပြီနော်
မလင်းလဲ့ရေ.. ဖိတ်ထားတာကြာလှပြီ.. အခုမှရောက်လာတော့တယ်.. ကိုကိုအတွက်.. အချိန်တွေ အများကြီးပေးနေရလို.နဲ့တူတယ်.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်... :) link ယူသွားပြီနော်.. ဆီပုန်းမှာ.. လာအော်ခွင့်လေး ပြုပါဦး